Isangqa iitattoo kunye nentsingiselo yazo | Ukuzoba
Isangqa iitattoos, uphawu laphakade kunye nolokugqibela
Kwihlabathi leetattoos zejometri kukho iindlela ezininzi ezihamba phambili. Kwelinye icala sine Iitattoo zonxantathu (apho umncedisi athethe khona ngaphezu kwesihlandlo esinye) ngelixa kwelinye, kuyakubizwa njalo Isangqa tattoos. Kwaye, andithethi isangqa seZen okanye iLuciano. Ngqo kwimilo yejiyometri esiyizobileyo ukusukela ebuntwaneni.
Isangqa iitatoo ziqhelekile kwaye ukusukela oko umkhwa waba kwifashoni ihipsta kunye nayo, i Iitattoos ezincinci, Ndiphinde ndabona ukungaziwa ngakumbi ngaphakathi kwe studio ze tattoo. Yinto elula kodwa enzima ukuyenza. Kwaye ukuba umvambo akanalo ukubetha okuhle, unokwenza ulusu lokwenene kulusu. Kuyafana nakwimigca ethe tye njalo njalo.
Intsingiselo kunye nesimboli esinayo isangqa (kwaye ngendlela esisele sithethile ngayo eTatuantes kwiminyaka embalwa edlulileyo) inomdla kakhulu. Isangqa, kuba ivaliwe ngokwawo imele unaphakade, ogqibeleleyo kunye ne isetyhula yobomi nemijikelo yayo. Yonke into ixhunyiwe kwaye intshukumo ayipheli. Ngaphakathi kweAlchemy, isangqa simele igolide, esona sinyithi sixabisekileyo.
Kwelinye icala, Isangqa tattoos Banikwa into ethile yokukhusela. Kwaye kukuba ukwenza isithethe ukukhusela umntu, isangqa sitsalwa ngenqaku embindini. Eli nqaku ngumphefumlo womntu ofuna ukumkhusela. Kususela kumaxesha amandulo, amagqwirha, oosiyazi kunye namagqwirha basebenzise iintlobo ezahlukeneyo zezangqa kwizithethe zabo zobugqi ukubiza imimoya.
Kwaye kuwe, ucinga ntoni ngeetattoo zesangqa? Unayo? Jonga olu qokelelo lweetatoo kwaye ubeke izimvo malunga nokucinga kwakho.
1 Iifoto zeCircle Tattoos
2 Iindidi zesangqa kwi tattoo
2.1 Isangqa esivulekileyo
2.2 Isangqa seZen
2.3 Izangqa ezixineneyo
2.4 Isangqa sameya
2.5 Izangqa ezingeneyo
2.6 Isangqa seCelt
2.7 Isangqa seChromatic
Iifoto zeCircle Tattoos
Iindidi zesangqa kwi tattoo
Ezi ntlobo zeetatoo zinokuba neentsingiselo ezahlukeneyo. Kodwa inyani kukuba ukongeza ekulula, nathi kufuneka sithethe malunga uphawu lokugqibelela kunye naphakade. Indlela yokubona ukuba izinto ezithile azigqitywa, enkosi kubume besetyhula. Ke ngoko, imijikelo eyahlukeneyo yobomi nayo ingena apha. Ukukhuselwa yenye yeentsingiselo esingenakulibala xa sibona umvambo onale ndlela ithile.
Inyani yile yokuba kwihlabathi leetattoos, sihlala siyilo olungapheliyo. Ukulula okanye ubuncinci kukwindlela yabo. Yiyo loo nto, njengeempawu ezithwala ezi mpawu sinesangqa esivulekileyo. Ziyaziwa njenge Iimpawu ze-Enso. Njengentsingiselo siza kuthi banamandla kunye nobuhle kunye nokukhanya kwangaphakathi. Ukongeza, ikwabonisa ukungapheli kunye nokulinganisela, yiyo loo nto ithathwa njengesimboli esibalulekileyo ngokomoya. Inokuhamba kunye ne-inki emnyama kunye nangokunika umbala omncinci ngenxa yombala we-watercolor. KumaBuddha ibonisa ukuba ingqondo ikhululeke kwaphela emzimbeni.
Sifumana i-axis efanayo okanye iziko kunye nezangqa ezininzi kuyilo olunye. Ngokufanelekileyo, uhlobo lokujikeleza. Ke ngaphambi kwalo mzobo, singathetha ngeentsingiselo ezintsha kunye nezinye, ezifanayo nezo besithetha ngazo. Ke kwelinye icala kuvusa ukungafi kanaphakade, kunye nesiqalo esitsha. Ke loo mntu woyise isigulo esithile okanye amaxesha anzima kakhulu ebomini, bakhethe njengenyathelo elitsha kunye nokufana nento elungileyo ezayo. Ikwamele ukukhangela ngaphakathi okwenziwa ngumntu ngamnye ngeentsuku zakhe zonke.
Zombini inkcubeko yamaMaya kunye neempawu zayo bezisoloko zigutyungelwe yimfihlakalo, kuyo yonke le minyaka. Kuyinyani ukuba ukuba sicinga ngetattoo, enye yezona zinto zibalulekileyo kuzo zihlala zenziwa ngendlela esetyhula. Ngaphakathi kuyo, sinokubona ii-silhouettes ezingapheliyo njengeempawu okanye iihieroglyphs. Ezinye zezo zihlala ziqokelelwa kwezi tatto zii-Hunab Ku, ezimelwe ngesangqa kwaye Ufuzisela uxolo kunye nokulinganisela. Ukuba ezinye izilwanyana ziyongezwa, njengokhozi, lumele ubulumko okanye i-jaguar, eya kuthi ifane nobomi okanye ukuchuma.
Xa sicinga ngetattoo enesangqa esidibeneyo, kufuneka sicinge nangakumbi ngehlabathi le-esoteric. Kuba inokumela isimboli yeVesica Piscis. Ke kwii-tatoos iya kubonisa umhlaba kunye nokomoya, kuba kunjalo umanyano phakathi kwamazwe amabini. Nangona ikwaqaqambisa intsingiselo yesini sabasetyhini.
Ukuphefumlelwa kweeTattoo kuza kuthi kwihlabathi leCeltic. Kule meko, singathetha ngokujikeleza kweCeltic, okungenasiqalo okanye isiphelo, ke oko kunentsingiselo yobomi obungunaphakade. Ewe kunjalo, kwelinye icala, sinokufumana into ebizwa ngokuba lixesha elingenasiphelo. Leliphi uhlobo lweqhina elidityaniswe kwisangqa. Kule meko, sithetha nge Intsingiselo yothando olungunaphakade.
Ubuchule yinto eyinxalenye yesangqa esibizwa ngokuba yichromatic xa siyibona kumvambo. Imalunga nokulandelelana kwemibala kunye nokumelwa kwayo, apho sifumana khona zombini imibala ephambili njengeziphumo zayo. Indlela yokunika intsingiselo emibalabala kunaphakade.
Imifanekiso: Pinterest, archzine.es, www.tattooers.net, tattooviral.com
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Iitatto ezinemilo » Isangqa iitattoos, uphawu laphakade kunye nolokugqibela
Yintoni intsingiselo enokuthi isangqa esivulekileyo sibe nomthi ngaphakathi kunye nezinye iintaka ngaphandle kwawo?
Ukuqokelelwa kweetatoo zemephu, kubahambi bokwenyani!
Iminqweno yeTattoo kunye nembali yayo